မရမ်းချောင်းသို့ တစ်ကြော့ပြန် →
Posted on October 15, 2010 by mamyathway
Number of View: 81791
ကျွန်မတို့ဟာ ပတ်ဝန်းကျင်လောကကို နေ့စဉ်ကြည့်မြင်နေကြ ဖြစ်ပေမယ့် မမြင်မတွေ့ခဲ့ကြပါဘူး။ ဘယ်အချိန်ကြမှ မြင်မိကြသလဲဆိုတော့ အကျွမ်းတ၀င်ရှိခဲ့တဲ့ တစ်စုံတစ်ဦးကိုဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ဒါမှမဟုတ် တစ်စုံတစ်ခုကိုဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ့်ရဲ့ပါတ်ဝန်းကျင်က ကွယ်ပျောက်သွားတော့မှ သတိထားမိတတ်ကြတယ်။ ဥပမာပြောရရင် ကျွန်မနေ့စဉ်အလုပ်သွားတိုင်း ဆုံတွေ့နေကြဖြစ်တဲ့ ဆံပင်ကိုအမြဲဖြန့်ချထားတတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတစ်ဦး.. သူဟာ ၃နှစ်လုံးလုံး ဘယ်လိုရာသီဥတုမှာပဲဖြစ်ပါစေ၊ မနက်၈နာရီထိုးတာနဲ့ ကားမှတ်တိုင်မှာ အမြဲစောင့်လျှက်သား တွေ့ရတတ်တယ်။ သူ့အသွင်အပြင် ကြော့ရှင်းနေတာကို ကြည့်ယုံနဲ့ သူဟာကုမ္ပဏီတစ်ခုခုမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူလို့ ခန့်မှန်းလို့ရတယ်။
အဲ့ဒီလို သူ့ကိုယ်တွေ့နေကျကနေ သူ့ကိုတစ်နေ့လောက် ကျွန်မမြင်ကွင်းကနေ မတွေ့မိရင် အမှတ်တရ မြင်ယောင်မိနေတတ်တယ်။ နောက်တစ်နေ့ဆို ကျွန်မသူ့ကို တွေ့နိုးနိုးနဲ့ ဂရုစိုက်ရှာဖွေနေမိပြီ။ သူ့ကို အကျွမ်းဝင်သူတစ်ဦးကို လွမ်းဆွတ်နေမိသလိုမျိုး ခံစားနေမိပြန်ရော..။ တစ်ပါတ်ထက်ပို မတွေ့မိတော့ရင်တော့.. သူ.. ခရီးများသွားသလား၊ နေမကောင်းများဖြစ်နေလား ..မတော်တဆ ထိခိုက်ဒဏ်ရာရနေသလား.. ဒါမှမဟုတ် ဒီထက်ဆိုးဝါးတဲ့ အမှုတွေနဲ့များ ကြုံနေရသလား၊ သူမရှိတော့မှ သူ့ကိုနှစ်ပေါင်းများစွာက ခင်မင်လာခဲ့မိသလိုမျိုး ခံစားမိလာရတယ်။ ဒီလိုနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ကျွန်မ သိနားလည်လာရတာကတော့ ကျွန်မတို့ရဲ့ နေ့စဉ်ဘ၀တွေမှာ အရေးပါတဲ့ အစိတ်အပိုင်းအဖြစ်နဲ့ အကျွမ်းတ၀င် ရှိနေတဲ့ သူစိမ်းတွေ ပါဝင်နေမိလျှက်ရှိတယ်ဆိုတာပါဘဲ။
နေ့စဉ် နေ့လည် ၃နာရီလာနေကျ စာပို့သမား၊ မနက်တိုင်း ခွေးစုတ်ဖွားလေးနဲ့ လမ်းလျှောက်ထွက်နေကျ လမ်းထဲက အမျိုးသမီး၊ စာကြည့်တိုက်မှာ ဆုံနေကြ အမွှာညီအစ်ကို၊ သူတို့ဟာ ကျွန်မနဲ့ မသိတဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သူတွေဖြစ်နေတာ အံ့သြစဖွယ်သိလိုက်ရတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကျွန်မတို့ရဲ့ ဘ၀မြင်ကွင်းတွေမှာ အရေးပါလှတဲ့ အမှတ်အသားတွေဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မတို့နေထိုင်သွားလာ လှုပ်ရှားရာနေရာမှန်သမျှကို အားဖြည့်လေးနက်စေ သူတွေပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ အလုပ်ခွင်သွားရာ လမ်းတစ်လျှောက် အဆောက်အဦ၊ ဈေးဆိုင်တွေကို မှတ်သား ဖြတ်သန်းသွားရသလိုဘဲ လမ်းမှာ ဆုံတွေ့နေကျ အမည်မသိသူတစ်ယောက်ကိုလည်း သတိထားမှတ်သားသွား မသင့်ပေဘူးလား။ ဆိုကြပါစို့။ လမ်းမှာ နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားတစ်ယောက်တွေ့လိုက်ရင် သူကတော့ ကျွန်မအဖို့ သူစိမ်းသက်သက်ပါဘဲ။ ဒါပေမယ့် အမြဲမြင်တွေ့နေကြ အပြေးလေ့ကျင့်နေသူကိုတော့ ကျွန်မအသိအမှတ်ကို ပြုမိနေသင့်တယ်။
မြင်တွေ့နေကျ သူစိမ်းတစ်ဦးကိုလည်း ကျွန်မတို့မသိစိတ်က မျှော်နေမိတတ်တယ်။ ဈေးဝယ်ထွက်လို့ ဆိုင်ရှင်က အသိအမှတ်ပြု ပြုံးပြတာဘဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ ခေါင်းကလေး ဆတ်ပြလိုက်တာဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ နေ့စဉ်အလုပ်သွားရာမှာ ကားမောင်းပို့ပေးနေကြသူကိုဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကလေးလက်ကိုဆွဲကျောင်းပို့နေတဲ့ မိခင်တစ်ယောက်ကိုဘဲဖြစ်ဖြစ်၊ သတိထားတွေ့မြင်နေရရင် စိမ်းမနေတော့ဘဲ စိတ်ထဲသက်တောင့်သက်သာ ရှိနေမိတတ်တယ်။
ကျွန်မကလည်း တခြားကျွန်မ မသိသူတစ်ဦးအတွက် အကျွမ်းတ၀င် မြင်နေကြ သူစိမ်းတစ်ယောက် ဖြစ်နေနိုင်မယ်ဆိုတာ စဉ်းစားမိပါတယ်။ စူပါမားကက်မှာ ဈေးဝယ်သူတစ်ဦးက ကျွန်မကို စနေနေ့တိုင်းဈေးဝယ်တတ်သူလို့ မြင်တွေ့သတိထားမိနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မနေ့စဉ်ထိုင်တတ်တဲ့ လက်ဘက်ရည်ဆိုင်ကို ကျွန်မ မသွားမိရင်လည်း မြင်တွေ့နေကျ တစ်ဦးက ကျွန်မကို သတိရမိနေတတ်တာမျိုးလည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်ကပဲ မြင်တွေ့နေကျ သူစိမ်းတစ်ဦးနဲ့ မနက်ခင်းဈေးမှာ ကျွန်မဆုံဖြစ်ပါသေးတယ်။ သူက ” မတွေ့တာကြာပြီနော် ” ဆို နှုတ်ဆက်ပြီး သူနဲ့ကျွန်မ ရှေးကသိခဲ့တဲ့သူတွေလို ၃မိနစ်ခန့် စကားတွေ ပြောဖြစ်ကြသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မတို့ တစ်ယောက်နာမည်တစ်ယောက်တောင် မသိကြပါဘူး။
အကျွမ်းတ၀င်မြင်ခဲ့တဲ့ သူစိမ်းတွေရဲ့ အရေးပါပုံတစ်ခုကို ကျွန်မမှတ်မိနေသေးတယ်။ တစ်ခါ ကျွန်မ ခွင့်ရက်ရှည်ယူပြီး ခရီးထွက်ရာက အိမ်အပြန်.. နေနေကျလမ်းထဲဝင်လာတော့ လမ်းတလျှောက် ဘယ်သူကိုမှမတွေ့လို့ တစ်ခုခုလစ်ဟာနေသလိုလည်း ခံစားနေမိတယ်။ ကိုယ့်နေရာမဟုတ်သလို စိမ်းနေမိတယ်။ မြင်တွေ့နေကျ ဦးထုတ်အစိမ်း အမြဲဆောင်းတတ်တဲ့ ဦးလေးကြီးတစ်ယောက်ကို တွေ့လိုက်ရမှ ကိုယ့်လမ်း၊ ကိုယ့်အိမ် ပြန်ရောက်ပြီလို့ ကျေနပ်စိတ်ဖြစ်မိတော့တယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်မတို့ဘ၀မှာ အကျွမ်းဝင်တဲ့ သူစိမ်းတွေသာ ပါဝင်နေခြင်းမရှိဘူးဆိုရင် ခြောက်သွေ့ ငြီးငွေ့စရာကောင်းတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဘဲ ရင်ဆိုင်ခရီးဆက် နေရလိမ့်မယ် ထင်မိတယ်။ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ ဘ၀မြင်ကွင်းတွေလည်း ဖြစ်လာလိမ့်မယ် မထင်မိဘူး။ သေခြာတာကတော့ ကျွန်မနဲ့ အစဉ်တွဲပြီး ရှိနေရမယ့်သူများမှာ အကျွမ်းတ၀င်ရှိတဲ့ သူစိမ်းများ အမြဲပါဝင်နေမှာပါ။
အခု ကျွန်မတို့တတွေ အွန်လိုင်းမှာနေ့တစ်ဓူဝ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ ဆုံတွေ့နေကြပါတယ်။ တချို့ဆိုရင် အပြင်မှာလုံးဝကို တွေ့မြင်သိထား ခြင်း မရှိကြပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေနဲ့ ရင်းနှီးခင်မင်ရတဲ့ အတိုင်းအတာကတော့ တကယ့်ကိုရက်တွေ ရှည်ကြာလာတာနဲ့အမျှ သံယောဇဉ်တွေ က ရင့်သန်နေရပါပြီ။ တစ်ခါတစ်ရံ အွန်လိုင်းမှာ အမြဲမြင်တွေ့နေကြ သူများ နှစ်ရက်သုံးရက်လောက် မတွေ့ရင်ဖြင့် ဘာများဖြစ်နေကြပါလိမ့်ဆို စိုးရိမ်မိနေတတ်ပါပြီ။ သူတို့တွေရဲ့ “မင်္ဂလာပါ ” “နေကောင်းလား” “ အလုပ်များနေလား ” ဆိုတာလေးတော့ အမြဲကြားချင်နေမိပါတယ်။ အနည်းဆုံး သူတို့မနှုတ်ဆက်အားတောင် အွန်လိုင်းမှာ သူတို့နဲ့အတူ အနီရောင်မီးနီလေးတွေ လင်းနေခဲ့မယ် ဆိုရင်တောင် အဲ့ဒီနေ့တွေ နေရတာ အဆင်ပြေလို့နေပါတယ်။
Reader’s Digest ( 1993, December) issues မှ Alice Steinbach ရဲ့ Those Strange’s We Know ကို ဆီလျှော်အောင် ခံစားပြီး ပြန်လည်ရေးဖွဲ့ထားခြင်းပါ။ နောက်… ပို့စ်အဟောင်းလေး ဆားပြန်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါကြောင်း။
This entry was posted in အသိသစ်တံခါးချပ်များ. Bookmark the permalink.
31 Responses to အကျွမ်းတ၀င်ရှိသောသူစိမ်းများ
ဟုတ်ပါတယ်အမရေ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ တွေ့နေကျ သူငယ်ချင်းတွေမတွေ့ရရင်တစ်မျိုးပဲ ဖြစ်နေတတ်တယ်။ မသိမသာ မျှော်လင့်နေတတ်တယ်။ သူတို့ အွန်လိုင်းပေါ်မှာရှိတယ်ဆိုရင်တော့ စကားမပြောဖြစ်ရင်သာနေမယ်။ စိတ်ထဲမှာ ပြည့်စုံနေသလိုပဲ။
ဒီဆားက စားလို့ ချိုပါတယ်..
အွန်လိုင်းပေါ်မှာ အွန်နေတာလေးမတွေ့တာကြာရင် စိတ်ပူမိတာတော့အမှန်ပဲ
အဲ အွန်နေတာတွေ့တိုင်းလည်း ပြောဖို့မအားဖြစ်နေရတော့ အားနာမိပြန်တယ်
ဟုတ်တယ်နော်.. အွန်လိုင်းပေါ်တွေ့ ရင် ခေါ်မယ်ခေါ်မယ်နဲ့ မခေါ်ဖြစ်ဘူး..မတွေ့ ရင်တော့ တစ်မျိူးပဲ.. ဂျီတော့ဖွင့်လိုက်လို့ တစ်ယောက်မှမရှိဘဲ နေရင် တိတ်ဆိတ်နေသလို တစ်မျိူးကြီးဖြစ်တာတော့ အမှန်ပဲ..
ခွင့် ၃ ပတ် ယူပြီး အလုပ်ပြန်ဝင်တော့ ပထမဆုံးနေ့မှာ အကုန်လုံးက အရေးတယူနဲ့ နှုတ်ဆက်ကြတယ်…
အဲဒီနေ့က အလုပ်ထဲမှာ တချိန်လုံး သာကြောင်းမာကြောင်းပဲပြန်ဖြေနေရတယ်….
၃ရက်လောက်နေတဲ့အထိ ခွင့်ပြန်တဲ့သတင်းကို မေးလို့ မပြီးကြဘူး …..
ရင်းနှီးကျွမးဝင်နေတဲ့ သူစိမ်းတွေကြားမှာ ဒီလိုပါပဲ မမရယ်….
မနေ့က ညီမ အွန်လိုင်းတက်မလာနိုင်လို့ လွမ်းနေတယ်ထင်တယ်..
ဟဲဟဲ .. ဟုတ်သလားဟင်။
တွေ့နေကျ မျက်နှာတွေ မမြင်ရရင် တစ်ခုခုလိုနေသလို အွန်လိုင်းပေါ်မှာလဲ တွေ့နေကျ နစ်ခ် ကလေးတွေ ရှိမနေရင်
မအားလို့ အွန်လိုင်းမတက်ဖြစ်ဘဲ ပုန်းနေခဲ့ရင်တောင် စိမ်းနေ/ နီနေတတ်တဲ့ အဲဒီနစ်ကလေးတွေကို
ပြီးတော့ ပြုံးပြုံးလေးပေါ့။ 🙂 🙂
October 16, 2010 at 1:07 am
ဖွင့်ထားတဲ့ သီချင်းလေးနဲ့ ပို့စ်လေးကို ဆပ်စပ်ကြည့်နေမိတယ်
ခေါင်းစဉ်လေးနဲ လိုက်ဖတ်တဲ့စာသားလေးတွေ ဖတ်လိုက်ရတော့ ကွန်မန့်မရေးပဲမနေနိုင်လို့ ရေးလိုက်တယ် .. မ..။
တကယ်တော့ အိန်လိုင်းပေါ် တက်နေရတယ်ဆိုပေမယ့် .. မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေ ကို ပြန်မပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး ..ဆိုရင်
စိတ်က အလိုလို ရှုပ်လာမိတယ်ဆိုတာကိုတော့ … လူတော်တော်များများ .. ခံစားရမှာပါ..။
မမြသွေးနီ တစ်ယောက် ဘ၀မှာ ဒီထက်ပိုအောင်မြင်ပါစေ…။
tin min nwe says:
October 16, 2010 at 11:06 am
ဟုတ်ပါတယ် အမ ရေ သိစိတ်က သူတို့ကို ဂရုမစိုက်မိပေမယ့် မသိစိတ်ကတော့ သူတို့ကို အွန်လိုင်းမှာ အမြဲ
ရှိနေချင်တယ်။စကားမပြောဖြစ်ပေမယ့် အွန်လိုင်းမှာ သူတို့ကိုတွေ့ရင် အော်နေကောင်းလို့ အွန်လိုင်းတက်
တာနေမယ်လို့ တွေးမိနေတက်တယ်။အားလုံးပဲ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ ဘ၀ ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ကြပါစေလို့
ဒီနေ့ တော့ မြသွေးနီ ရုံးပိတ်လို့ မရှိဘူးထင်တယ် မတွေ့တော့ တမျိုးဘဲ အမ လည်း မအားလို့ မဝင်ဖြစ်တာတောင်ကြာသွားပြီ
Hello! Is it OK if I goabit off topic? I’m trying to read your post on my iPhone but it doesn’t display properly, do you have any suggestions? Thank you for the help I hope! Cletus
ဒီပို့စ် ဖတ်ပြီးတော့ အစ်မ ရှိနေလားလို့ လစ်ထဲမှာ ရှာကြည့်သေးတယ်။
ရှိလည်း မရှိဘူး။ နောက်မှ တနင်္ဂနွေ မှန်း သတိထားမိတော့တယ်။
တွေ့နေကြလူတွေ မတွေ့ရင် သို့လော သို့လော နဲ့
အရမ်းကြာသွားရင်တော့ နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့ချိန်မှာ စိတ်ဆိုးစရာ ရှိခဲ့လားလို့ တွေးမိပြန်ရော။
ZAW MYOTHANT says:
YOUR BLOGGER is very good.every body also like i think.
October 18, 2010 at 11:13 am
မဖတ်ရသေးရင်တော့ အသစ်ပါ၊ ဖတ်ရင်းခင်မင်မိပါတယ်
သဘောတူတယ်အမရေ။ အခုဆိုရင် အွန်လိုင်းမှာ ကိုယ်နဲ့သိတဲ့သူတွေရော၊ မသိတဲ့သူတွေရော မီးလေးများ မစိမ်းနေ မနီနေ မ၀ါနေခဲ့ဘူးဆိုရင် သူတို့တွေကို သတိရတတ်နေပြီ်အမရေ….
အွန်လိုင်းမှာတော့မသိဘူး ကျွန်တော်တွေ့ နေကြလူတွေ မတွေ့ ရင် မကြီးပြောသလိုပဲ.. တစ်ခုခုလိုနေသလိုပဲ စားနေကြမုန့်ဆိုင်ကအဒေါ်ကြီးကို မတွေ့ ရင် ဘာဖြစ်လို့ လဲ နေမကောင်းတာလား ဆိုင်ရှင်ပြောင်းသွားတာလား လို့  စိုးရိမ်မှုတွေဖြစ်ဖူးတယ်….ကိုယ်နဲ့ မသိလဲ တွေ့ ဘူးနေကြဆိုရင် အလိုလို သံယောဇဉ်တွေ ဖြစ်ပေါ်တတ်တယ်..မကြီးရေ…။
ကမ္ဘာကြီးကိုယ်တိုင်က တွေ့ နေပေမယ့် မခေါ်ဖြစ်တဲ့
ဒီတစ်ခါတွေ့ ရင်တော့ နှုတ်ဆက်လိုက်ပါဦးဗျာ ….
BMW guy says:
i just wanna thank you for sharing your this info on your site
November 4, 2010 at 6:00 am
ဂုဏ်ယူပါတယ် အမရေ ပထမဆုရတာကိုပေါ့
အစ်မလိုလူ မျိုးကတော့ရှားမှရှားပဲ အစ်မက လုပ်ငန်းတွေလဲ လုပ်တယ်
နောက် အိမ်ရှင်မတစ်ယောက် blogger တစ်ဖြစ်လဲ စာတွေလဲရေးတယ်
နောက်ပြီးပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေမှာလဲ ဦးစီးဦးဆောင် လုပ်သေးတယ်
အစ်မကို ကြည့်ပြီး ကျွှန်မတောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ်သိမ်ငယ်လာ သလို ပဲ
အစ် အလုပ်အများကြီးလုပ်နိုင်တယ် လေးစားပါတယ် အမရယ်…. အစ်မ blog လေးကလဲ ဖတ်မိရင် မထချင်တော့လောက်အောင်ကို ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်………..
Brioni Jacket says:
အရမ်းကောင်းတဲ့ အတွေးလေးပါ….တွေ့ကြုံနေရတာတွေကို ထိထိမိမိ ရေးတာ တကယ်ကောင်းပါတယ်…
အစ်မရေးတဲ့ ပိုစ့်လေးတွေက လူတွေရဲ့ နေ့စဉ်ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ဘ၀တွေထဲက အကြောင်းအရာလေးတွေကို ဖော်ထုတ်ပြသထားတာဆိုတော့ ဖတ်ရတာ တော်တော်လေးသဘောကျစရာကောင်းတယ်။း))
ဟုတ်တာပေါ့…ဆရာမရဲ့ အတွေးနဲ့ အရေးလေးကိုနှစ်သက်မိပါတယ်။
အမပြောတာ အရမ်းမှန်တာ ပဲ
ညီမ လဲ အဲ့ဒိ့ သူစိမ်းတွေက ဘ၀မှာ အရေးပါမှန်းမသိ ပါနေပြီလေ
ဟုတ်တယ် မတွေ့တာကြာရင် အော် မတွေ့ပါလားဆို သတိရနေမိတတ်တယ်။
သဘောတူသလို လက်ခံပါတယ် မမ….သူစိမ်းတွေ ပေမဲ့ ဖော်ရွေပျူငှာသင့်ပါတယ်လို့ထင်မိပါတယ်
ကိုယ်နဲ့ အရမ်းကြီး ခင်တာမဟုတ်လဲ အမြဲ တွေ့ နေကြ မတွေ့ တော့ရင် တစ်ကယ်ကို တစ်မျိုးလေး ခံစားရတယ်နော်..။ တစ်ကယ်ကို လိုအပ်တဲ့ တစ်စိမ်းတွေပါနော်…။
LeaveaReply to စံပယ် Cancel reply
ချစ်ခြင်းသည်သာ တစ်ကမ္ဘာဆိုသော်ငြား - 284112 hits
အကျွမ်းတ၀င်ရှိသောသူစိမ်းများ - 81791 hits
သမီးရဲ့မျက်လုံးလေး - 65651 hits
ခိုးလိုးခုလုဖြစ်နေလို့ - 63413 hits
ဧရာဝတီကို စောင့်ရှောက်ကြကုန်လော့… - 61567 hits